5 Zviratidzo Iwe Une Hanya Zvakanyanya Nezve Izvo Vamwe Vanhu Vanofunga - Pfungwa
5 Zviratidzo Iwe Une Hanya Zvakanyanya Nezve Izvo Vamwe Vanhu Vanofunga
Iwe unozeza usati waisa chimwe chinhu pasocial media nekuti unotya izvo vanhu vachati kana ukadaro? Kana kuti pamwe unorega kupfeka bvudzi rako neimwe nzira nekuti iwe unotya kuti shamwari dzako, mudiwa, kana vabereki vangakushoropodza.
Ah mudiwa. Saka vanhu vazhinji vari muchikepe chimwe newe, uye zvinosuruvarisa pamatanho mazhinji akasiyana.
Vanhu vakawandisa kwazvo havamborarama Chokwadi chavo nekuti vanotyiswa nezvingafungwa nevamwe pamusoro pavo… asi izvo hazvisi kurarama chaiko uye zvechokwadi, ndizvo here?
Tarisa uone zviratidzo zvakanyorwa pazasi: kana uchikwanisa kuenderana nevazhinji vacho, mikana urikushandisa nguva yakawandisa (uye simba) uchinetseka nezve izvo vamwe vanhu vanofunga nezvako.
1. Iwe Unogadzirisa Yako Yemagariro Media Kudya
Iwe unogona kunge uchidya hotdog-yakazadza cheji sangweji yekudya kwemanheru, asi iwe unozotumira mufananidzo weiri iceberg lettuce saladi uye cucumber smoothie pa Instagram nekuti unoda kubvumidzwa kubva kune vako vaunoziva nezvehutano.
Unorega kutumira bhuku rauri kuverenga iye zvino paGoodreads nekuti iwe unofunga shamwari dzako dzekuverenga dzichakutsvaira nekuda kwayo.
Iwe unonyatso tarisa zvese zvaunotumira - ingave iri nyaya kana chirevo pane saiti yemumwe munhu - kubva pese pese papi usati waigovana paruzhinji, paine mukana wekuti mumwe munhu mune yako masocial magungano agumbuke nezvazvo ndokurwisa iwe it.
kutonhora kwebwe vs donald trump
Wow, izvo zvachose hazvina kunetseka zvachose, ndizvo? Uye vanhu vazhinji vanoita chaizvo izvi.
Iwe unombozviona iwe uchimbomira usati waisa pikicha kana nyaya nezve chimwe chinhu chawakanyatsoda nekuti haufunge kuti chinotonhorera zvakakwana kugovana nevanhu vaunoziva?
Zvibvunze pachako izvi: kana iwe uchitya kuti vanhu muhupenyu hwako vanozove vane hutsinye kwauri nezvesarudzo dzako dzehupenyu, nei ivo vari muhupenyu hwako zvachose? Ndechipi chinangwa chavanoshandira kunze kwekukuchengeta uchinyemwerera padanho rekushushikana pamusoro pekuti vachabvisa mvumo yavo nekutsigira pamusoro pechinhu chakatendeseka chawakagovana?
2. Hauna Ratidza Kunzwa Kwako
Ngatitii iwe uri muboka revezera rako uye ivo vese vari kutsvaga pane chazvino chinhu chavanoda vese. Nekuda kwekukakavara, ngatitii chinhu chavo chitsva chavanonyanya kufarira kare uye chia mbeu pudding neavocado crème. Ngatitaureiwo kuti iwe haugone kutsungirira kuisa izvo zvinhu mumuromo mako usingasanganisi nhengo dzako dzemukati… asi iwe unganyepedzera kuzvifarira, kana kukumbira ruregerero zvakanyanya kuti chimwe chinhu chirimo chingangomutsa imwe yehaga yako yezvokudya kana kupindira nekuchenesa uripo kuitira kuti ugone kubuda pakuidya kana ivo varipo.
Kana kuti pamwe inguva yako yekusarudza rinotevera boka zviitiko zvekudyidzana uye kupfuura chero chinhu chaungade kuenda kukokorodzano yeSci-Fi inoitika mutaundi, asi iwe, pachinzvimbo, uratidze mutambo weumhizha wefirimu iwe waunoziva vazhinji vevamwe sarudza. Iwe unosuwa, uye panogona kunge paine zvimwe zvekare kutsvedza mumashure, asi zvirinani kuruma bara pane kudzingwa nevanhu vaunoda kukuda, handiti?
Iwe unofunga kuti zvine hutano here? (Kwete iyo pudding, hunhu.) Kana iwe ukawanzozviwana iwe uri mumamiriro ezvinhu apo iwe uchifanira kunyepedzera kuva mumwe munhu wausiri kuitira kuti ugamuchirwe neavo vakakukomberedza, inogona kunge iri nguva yekuwongorora futi yako yemagariro boka.
Ndiani iyeye wauri kuvevarira kufadza? Nei kusimbiswa kubva kuvanhu ava kuchikosha pane kurarama chaiko?
unoziva riinhi kuti hukama hwapera
3. Iwe Gauge Yese Sarudzo Nekuti Iwe Uchaita Kuti Vamwe Vafare Kana Kwete
Unoziva here kutaura kwacho, 'Unogona kufadza vamwe vevanhu nguva dzese, unogona kufadza vanhu vese dzimwe nguva, asi iwe haugone kufadza vanhu vese nguva dzese'?
Zvakanaka, vamwe vanhu vanoedza kwazvo kuita chaizvo izvo, kunyangwe ivo vachiziva zvakadzika pasi kuti hazvigoneke. Izvi zvinonyanya kuitika kana zvasvika pane chimwe chinhu sekuronga chiitiko: unoziva here kuti varoora vangani vanosvika padhuze nekuparara kwekutya vachingoedza kusarudza kuravira kwekeke uko ruzhinji rwevanhu vasiri kuzovenga?
Izvo zvakakosha kutora zvido zvevamwe uye kutsamira mukutarisa, asi zvinoshamisira kushushikana kuyedza kuita kuti munhu wese afare nesarudzo dzese dzakaitwa. Kunyangwe iwe uchishongedza imba yako, kusarudza menyu yekudya kwemasikati, kana kusarudza rurimi rwekudzidza, hazvisi izvo zvakanyanya kukosha here kuita sarudzo iyo inoita kuti ufare uye inokukurudzira iwe zvakanyanya?
alice musondland makotesheni tese tatsamwa pano
Sei Kusatarisira Zvinofungwa Nevanhu
20 Zviratidzo Iwe Uri Kuremekedza Iwe Pache (Uye Sei Kumira)
Zvikonzero zvinomwe Unofanirwa Kuva Nehanya Nevanhu Vakanyanya Kunaka
6 Zvekusimbisa Kudzokorora Paunenge Uri Kufungisisa
Kunze-Kushanda Kushushikana Kwakanyanya Kupfuura Zvaunofunga Kuti Zviri
Maitiro Ekuziva Kuderera Kusanzwisisika (Uye 5 Matanho Ekukunda Izvo)
4. Iwe Pfeka Zvaunofunga Iwe 'Unofanira,' Kwete Izvo Zvaunoda
Paunovhura kabati rako, unofadzwa nezvaunoona imomo here? Kana kuti wakarega basa kune zvipiro zvawakabvumidza iwe kupfeka nekuti zvinofungidzirwa setaera nevezera rako?
Zvino, zvinonzwisisika kuti panogona kunge paine kodhi yekupfeka kwaunoshanda. Mushure mezvose, kana iwe uchishanda muhofisi, iwe ungangodaro uchifanira kutevedzera kune zvebhizinesi zvisina kujairika kana kunyange bhizinesi rembatya kupfeka, saka kufamba-famba uchitenderera mubhora rebhora uye mapapiro enhau ingangodaro isiri sarudzo inoshanda. Izvo zviri kutaurwa, panogara paine imwe nzira yekuratidza chokwadi chako chechokwadi, kunyangwe zvangove neanonakidza jozi reshangu kana inoshamisa chishongedzo.
5. Uchaita Zvinhu Zvaunovenga Kudzivisa Kusatenderwa Kana Kuseka
Vakawandisa vanhu vakavharirwa muhukama kana michato yavanovenga, kana mabasa avanoshora, kana kunyange nharaunda dzinovakanganisa, nekuti kuita kudaro kunoreva kuti vari kurarama zvinoenderana nezvinodiwa nevamwe vanhu uye zvavanotarisira nezve hupenyu hwavo. Kune avo vane kuzvitutumadza kunotyisa, kuita kuti vamwe vanhu vadade navo kwakanyanya kukosha kupfuura kuita izvo zvinoita kuti vafare.
Vazhinji vavo havatozive chii chinoita kuti vafare: vanga vari vanhu-vanofadza kwehupenyu hwavo hwese zvekuti ivo vakatendeka vaisazokwanisa kupindura kana vakabvunzwa kuti hupenyu hwavo hwakanaka hwaizoratidzika sei.
Izvi zvinoita kunge zvaunojaira zvachose here? Wakakoshesa here pachikoro icho chakafadza mhuri yako, pane izvo zvawainyatsoda kutevedzera? Iwe unoda basa rako here? Kana kuti uri kushanda pabasa raunoshora, asi zita rako rebasa rinofadza vamwe vanhu pese paunotaura nezvazvo?
Iwe unofunga kuti avo vakakukomberedza vangazofunga zvishoma pamusoro pako kana iwe ukaita shanduko dzinokutendera iwe kurarama chokwadi chako zvakanyanya?
Sei pfungwa dzevanhu ivavo dzichikosha?
nhetembo pamusoro pemudiwa achifa
Hapana Munhu Kubvumidzwa Kunokosha Asi Kwako
Kana iwe ukaona kuti uri kufamba pamusoro pemazai eazai uye uchinetsekana pamusoro pesarudzo dzako dzakasiyana siyana dzezuva nezuva nekuti iwe unotya kubata kushungurudzika kune avo vakakukomberedza, chingave chiri zano rakanaka kuzvibvunza kuti nei uri kushamwaridzana nevanhu vari kudaro kukasira kukutonga nekukutema.
Hupenyu hunogona kuve hwakaoma pane dzimwe nguva, saka zviri nani kuti tizvitsigire neavo vanotibatsira kukudziridza mwenje wedu wemukati, kwete avo vanozoidzima. Zvisinei nekuti isu takakomberedzwa nevamwe vanhu yakawanda yenguva, hupenyu rwendo rwatinoita isu pachedu, asi isu tinosvika pakusarudza vatinotora navo.
Ungada here kuperekedzwa neavo vanoita kuti upenye, uye nekukubatsira iwe kufamba munzira yako munzira yehupenyu? Kana avo vanokuita kuti ubvunze nhanho dzese dzaunotora? Funga nezve izvi nokungwarira. Inogona kunge iri nguva yekuti iwe uite shanduko.
ini ndiri munhu chaiye wekuAmerica kurwira kodzero dzemurume wese
ndiani mudiki wwe superstar
mambo wemhete wwe
nhetembo yemunhu akafa